के टीपीएसप्राप्त नेपाली ग्रिनकार्डका लागि योग्य भएका हुन् ? (भिडियोसहित) - Khasokhas Weekly
अमेरिकाको नाइन्थ सर्किटका लागि कोर्ट अफ अपिलले गरेको निर्णयबाट टीपीएस प्राप्त अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुलाई कस्तो फाइदा पुग्छ ? के टीपीएस प्राप्त नेपालीहरु ग्रिनकार्डका लागि योग्य हुन्छन् ? यसविषयमा न्युयोर्कका चर्चित कानुन व्यवसायी बासु फुलाराजीसँग खसोखासका प्रधानसम्पादक किशोर पन्थीको कुराकानी लाइभ । तपाईका प्रश्न छन् ? कमेन्टबक्समा लेख्नुहोला । http://www.khasokhas.com/?p=11500
Posted by Khasokhas Weekly on Saturday, April 8, 2017
आइतवार, चैत्र २७, २०७३ मा प्रकाशित